अब को बन्ला राष्ट्रपति र सभामुख ? यस्तो छ सम्भावना – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ अब को बन्ला राष्ट्रपति र सभामुख ? यस्तो छ सम्भावना
पुलेसो २० पुस, २०७७, सोमबार १२:०९
पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति बनाए पनि एमाले-माओवादी केन्द्रले आफ्ना शीर्षस्थ नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नेगरी नयाँ सांगठनिक प्रारूप अझै तयार गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी स्वयंले पनि आफू छोटो समय मात्रै राष्ट्रपति भएकाले पुनः दोहोर्‍याइदिन गठबन्धनका नेतासँग लबिङ थालेकी छन् । भण्डारी नै राष्ट्रपति दोहोरिए माओवादीलाई पनि उपराष्ट्रपति दोहोर्‍याउन दबाब पर्नेछ । त्यसो हुँदा उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन दोहोरिनेछन् । ‘भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति दोहोर्‍याउन परेमा हामीबाट फेरि पासाङजी नै उपराष्ट्रपतिमा दोहोरिनुहुन्छ,’ माओवादी नेता चक्रपाणि खनालले अन्नपूर्णसँग भने । तर, राष्ट्रप्रमुख सेरेमोनियल पद भएकाले त्यसलाई कार्यकारी प्रमुखझैं दोहोर्‍याउनु उचित नहुने भन्दै एमालेवृत्तभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । एमालेका एक नेताले भने, ‘यस्तो प्रस्ताव नै असहज हो, गणतन्त्र भर्खरै स्थापित भएकाले यस्तो बेला हामीले अरू देशका गणतन्त्रको अनुभवलाई पाठका रूपमा लिनुपर्छ । सेरेमोनियल पद दोहोरिने कुरा अन्यत्रको अनुभवमा उचित देखिन्न ।’